Salah Abdeslam oo baadi-goob weyn loogu jiro, xilli lala xiriirinaayo weeraradii Magaalada Paris. – STAR FM SOMALIA
Salah Abdeslam oo baadi-goob weyn loogu jiro, xilli lala xiriirinaayo weeraradii Magaalada Paris.
Mohamed Abdeslam, ayaa la dhashay Salah Abdeslam oo baadi-goob weyn loogu jiro, xilli lala xiriirinaayo weeraradii Magaalada Paris. Mid ka mid ah raggii toogashada gaystay oo isna is qarxiyay ayaa ahaa Ibrahim Abdeslam, oo la dhashay labadaasi nin.
Mohamed Abdeslam oo shir jaraa’id ku qabtay Caasimadda Belgium-ka, ayaa walaalkii Salah Abdeslam ugu baaqay in uu isu dhiibo sharciga, haddii uu ku lug lee yahay weeraradii Magaalada Paris.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ugu baaqo in uu is dhiibo, dabcan haddii uu ku lug lee yahay, waa inuu aqbalaa masuuliyadda.” Ayuu yiri Mohamed Abdeslam
“Inkastoo ay dadka qaarkii qabaan inaan walwalsanahay, aniga iyo qoyskeygaba aad ayay noo taabatay. Waxaan ka fekersanahay dhibanayaasha, laakiin waa inaad fahamsan tahay waxa uu hooyadey ku reebi karo mid ka mid ah carruurteeda.” Ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii wata.
“Wiilasha ila dhashay waa wiilal waaweyn, ma weydiineyno waxa ay ku sameeyeen waqtigooda.” Ayuu yiri ninka la dhashay baxsadka.
Mohamed Abdeslam waxaa Sabtidii lagu xiray Magaalada Brussels, laakiin waxaa la sii daayay Isniintii, iyadoo aanu wax xukun ihi ku dhicin.
Ninkan, ayaa cadeeyay inaysan wax mushkilad ah kala kulmin laamaha ammaanka ee dalka Belgium-ka, mudadii ay xirnaayen isaga iyo qaar kaloo ka mid ah qoyskiisa.
Booliska Faransiiska, ayaa Salah Abdeslam u aqoonsaday mid halis ah, waxaana dadka looga digay inaanay ninkaasi soo dhaweysan, kuna soo wargeliyaan hay’adaha ammaanka, goob kastaa oo ay ku arkaan.
Waxaa la soo saaray warqad caalami ah oo lagu soo xiri karo ninkaasi, meelkastaa oo dunidu uu kaga sugan yahay, waxaana wax lagu qanco loo arkaa in cadaaladda uu wajaho.
warren allott /daily telegraph
Brother of two paris attackers Mohammed abdesalem he was arrested and then let go by the police, speaks at the family home.
Ruushka, ayaa soo jeediyay in la ballaariyo iskaashiga militariga iyo sirdoonka ay la leeyihiin dalka Faransiiska
Ciidamada Booliska Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa helay hub badan